भोली बुकक्लोज हुने भएपछि यी दुई कम्पनीको लाभांश जोगाउने दिन आज सम्म मात्रै,कुन कम्पनी कस्तो ? » aarthikplus
भोली बुकक्लोज हुने भएपछि यी दुई कम्पनीको लाभांश जोगाउने दिन आज सम्म मात्रै,कुन कम्पनी कस्तो ?
२०७७ चैत्र १८ गते, बुधबार १०:५० मा प्रकाशित
काठमाडौं । सूर्योदय लघुवित्त र सारथी नेपाल लघुवित्तले साधारण सभा तथा लाभांश वितरण प्रयोजनार्थ भोलि अर्थात चैत १९ गते बुकक्लोज गर्दैछन्। सोही कारण यी लघुवित्तहरुको लाभांश प्राप्त गर्न आजसम्म शेयरधनी कायम हुनुपर्नेछ। यो भए संगै नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) मा सूचीकृत दुई कम्पनीहरुको लाभांश सुरक्षित गर्ने आज (चैत १८ गते) अन्तिम दिन रहेको हो ।
सूर्योदय लघुवित्त (SLBS) ले चैत ३१ गते, मंगलबार, पुतलीबजार नगरपालिका वडा नं. ३, स्याङ्जा (सहयात्री पार्टी प्यालेस, गुडिखोला) मा आठौँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ। सो सभा बिहान ८ बजे शुरु हुनेछ। सभाले असार मसान्तसम्म कायम चुक्ता पूँजीको १५.३४ प्रतिशतका दरले बोनस शेयर वितरण गर्ने तथा सोको कर प्रयोजनार्थ ०.८० प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव पारित गर्नेछ।
यसका साथै, सभाले सर्वसाधारण तर्फको हिस्सा बढाई ३० प्रतिशत पुर्याउन पुनः सर्वसाधारणमा शेयर एफपीओ निष्काशन गर्ने, अन्य उपयुक्त लघुवित्त वित्तीय वित्तीय संस्थासँग मर्जर तथा एक्विजिशनसम्बन्धि कार्य गर्न सञ्चालक समितिलाई अख्तियारी दिने लगायतका विशेष प्रस्तावहरु पनि पारित गर्नेछ। त्यसैगरी, सारथी नेपाल लघुवित्त (SNLB) ले बैशाख ३ गते शुक्रबार, होटल अरनिको, धुलिखेलमा बाह्रौँ वार्षिक साधारण सभा बोलाएको छ। सो सभा बिहान ११ बजे शुरु हुनेछ। सो सभाले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट मर्जरपश्चात हाल कायम चुक्ता पूँजीको ८.१३ प्रतिशत बोनस शेयर र सोको कर प्रयोजनार्थ ०.४२ प्रतिशत नगद लाभांश वितरण गर्ने विशेष प्रस्ताव पारित गर्दैछ। एफपिओ निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पनि पास गर्ने बुझिएको छ ।